Forex Trading software and forex school for beginner's | Nepal's Best Travel Guide
Forex Trading software and forex school for beginner’s
भक्तपुर को लोकल पत्रिका मा छापेका केही लेख तथा अन्तरवार्ता
GCI Trading Software for free
Note: यो सफ्टवेयर तथा बजार बारे तपाईं आँफैले पनि ईन्टरनेट मा खोजेर सिक्न सकिन्छ। हामी सँग सिक्नु परेमा half an hour को $ 50 लागने छ।
यो बजार बारे अध्ययन गर्न यो link मा जानु होला
यो बजार को बिदेशी मुद्रा मा लगनी गर्ने बारे जानकारी लिनको लागि आवसेक समाचार उपदेत गर्ने साईट link
यो बजार को लागि काम गर्ने केही महत्वपूर्ण लिन्क हरु
abhiyan.com.np (नेपाल बाट प्रकासित हुने )
भक्तपुर को ख्वोप कलेज मा विद्यार्थीहरुलाई बस्तु बजार को ज्ञान दिन्दै गर्दा को केही फोटोहरु
हाम्रो कार्यक्रम मा सहभागी हुनु भएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई धन्यबाद। नेपाल सरकारले निती नियम नबनैकन यो ब्यापारमा नेपाल को कुनै एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर को माध्यम बाट लगानी न गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कम्पनी बाट लगानी गरिरहनु भएका साथीहरुले अकाउन्ट बन्द गरी तत्कल बैंक बाट पैसा निकाल्न आनुरोध गर्दछु। “नियम बनाउन सम्बन्धित निकायलाई दाबब” ब्रोकेर साथीहरु लाई धर्य गरिदिनुहुन अनुरोध छ।
Article By Ranjan Basi (Rajan)
जसरी हरेक अन्ध्यारो रातपछी सुनौलो बिहानि आउछ त्यसरी नै अर्थशास्त्र को ब्यापारचक्र मा (in Business Circle) Recession, Depression, Recovery र Boom को अवस्थामा परिवर्तन भई रहन्छ । केही हप्ता अगाडि अमेरिका लाई चाइना ले पछी पार्दै संसारकै ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश बनेको छ। अहिले एसिया का केही देशहरु मिलेर डलर को सतामा नयाँ मुद्रा (New Currency) निकाल्दै छ । त्यस पछी अमेरिकाको अर्थतन्त्र गिर्ने मात्र होइन धोस्त नै हुने अनुमान गरिएको छ। अहिलेको समयएमा संसारलाई हाँक्ने भनेको एसियाका देशहरु नै हो। त्यसैले समय र परिस्थिती अनुसार हामीले पनि चाइनिज भाषा र संसार मा हुने हरेक नयाँ प्रबिधिमा Update भएर बस्नु पर्ने देखिन्छ . नयाँ प्रभिबिधिले गर्दा आजभोलि चाइनिज भाषा मोबाईल तथा ल्यापटप मा खेली खेली सिक्न सकिनछ। आज तपाईंहरुलाई संसारकै ठुलो अन्लाईन बाट ब्यापार गर्ने सफ्टवेर र सेकेन्ड सेकेन्ड मा अप्डेट हुने ब्यापार सँग सम्बन्धित साईट हरु फ्री मा सेर गर्दै छु। जुन ब्यापार लाई बिदेशी मुद्रा सतहिको ब्यापार (forex trading) भनेर पारीचित छ। यो ब्यापार संसारकै ठुलो ब्यापार हो। यो ब्यापार ईन्टरनेट बाट नै गर्न सक्ने भएकोले संसारकै सबै भन्दा बढी करोबार हुन्छ। यो ब्यापार लाई ब्यापार को पनि ब्यापार भनेर चिनिन्छ। यो ब्यापार शेर बजार को बिकासीत रुप हो। यो सफ्टवेर बाट सुन, तेल लगयत २०० भन्दा बढी बिदेशी मुद्रा तथा बस्तुहरुमा लगनी गर्न सकिन्छ। यसमा पहिला virtual currency राखेर practice गर्नु पर्छ। सिकी सकेपछी आफुले नाफा कमाउन सेक्ने अवस्था पुगेपछी मात्र लगनी गर्नु पर्दछ। राम्रो सँग सिकी सकेपछी यही सफ्टवेर मा लगानी गरेर ब्यापार सुरु गर्न सकिन्छ। Update on 12/18/2014
भक्तपुर को शार्दा कलेज मा IT Knowledge share गर्दै गरेको केही फोटोहरु
हाम्रो साईट मा बढीले मन पराएको पेज ” How to Get Google Adsense Account Approval in Nepal ”
My Current Job and Post are as follows
Web Master : (Samsara Resort (Hotel) , Thamel , Kathmandu, Url: www.samsararesort.com)
Web Developer : ( Yala Adventure (p). Ltd. Thamel, Kathmandu, Url: www.yalaadventure.com)
Web Manager : ( Asiatic Travels (p). Ltd. Thamel, Kathmandu, Url: www.asiatictravels.com
My Past work and Post:
Past Bhaktapur District Branch Manager
Muktinath Investment (p). Ltd.
Past Sub Broker
Deep laxmi Commodities (p). Ltd.
London Business, Bhaktapur, Nepal
1st e-Commerce Training Company in Bhaktapur